Dominoes 🥇 Gali oo ku raaxee emulator.online
Dominoes. Ciyaarta dominoes waa mid aad u adag caan ka ah adduunka oo dhan oo ay ku ciyaaraan kumanaan qof. Kulamada qoyska, wareegyada asxaabta, xafladaha, hilibka la cuno, maalmaha fasaxa ah, iwm.
Waa suurtagal inay tahay mid ka mid ah ciyaaraha ugu da'da weyn ee ay jiraan tixraacyo.
Dominoes: sida loogu ciyaaro talaabo talaabo talaabo 😀
Waa maxay domino?
Domino waa ciyaar loox oo adeegsata gogo 'oo qaabab afar gees ah, guud ahaanna la siiyay dhumuc iyaga siinaysa iyaga qaabka isbarbar dhigga, taas oo mid ka mid ah wejiyada lagu calaamadeeyay dhibco muujinaya qiyam tiro.
Ereyga sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in si shaqsi ah loogu qoro qaybaha ka kooban kulankaan. Magaca ayaa laga yaabaa inuu ka soo jeedo ereyga Latin "bilaash ah domino" ("Mahadsanid Rabbiga"), oo ay yiraahdeen wadaaddada reer Yurub si loo xuso guusha ciyaar.
Tirada ciyaartoyda: 4
Cadad: 28 qaybood oo leh dhinacyo u dhexeeya 0 ilaa 6.
Cadad ka-qaybgale kasta: 7 qaybood oo kaqeybgale kasta.
Ujeeddada ciyaarta: samee 50 dhibcood.
Gabal gabal: waa gabal ka kooban laba daraf, mid walbana leh lambar (tusaalooyin jajab ah: 2-5, 6-6, 0-1).
Sidee loo dhigaa gogo '?: markii gabal la dhigo mid kale oo ugu yaraan hal lambar wadaaga (tusaale: 2-5 kulan 5-6).
Ku dhaafida markeeda: marka uusan laacibku lahayn gabal ku habboon labada dhinacba.
Ciyaarta ayaa xaniban: marka labada ciyaaryahan midkoodna uusan lahayn gabal ku habboon dhammaad kasta.
Ayaa ku guuleysta ciyaarta?: markii mid ka mid ah ciyaartoydu uu maareynayo in qaybo ka mid ah gacanta uu ku haysto, dhammaantoodna uu wada dhejiyo
Sidee loo ciyaaraa Dominoes?🁰
Qaybaha ayaa "isku shaandheysan" miiska, ciyaartoy walbana wuu qaataa 7 qaybood oo lagu ciyaaro. Ciyaaryahanka ciyaarta bilaaba waa kan wuxuu leeyahay gabal 6-6🂓. Ku bilow ciyaarta adoo dhigaya qaybtan bartamaha miiska. Halkaas, u ciyaaro saacad ka hor.
Ciyaaryahan kasta waa inuu isku dayaa inuu qaybo ka mid ah guntooda ku dhejiyo qaybaha dhamaadka ciyaarta, midba mar. Marka ciyaaryahan uu maareynayo inuu ku habboon gabal, leexashada waxaa loo gudbiyaa ciyaaryahanka xiga. Haddii ciyaaryahanka uusan haysan gabal ku habboon labada dhinac, waa inuu ka gudbaa markeeda, adigoon ciyaarin wax gogo 'ah.
El ciyaarta way dhamaan kartaa laba xaaladood: marka ciyaaryahan uu maareeyo inuu garaaco ciyaarta, ama marka ciyaarta la xiro. Ciyaaryahankii ugu horeeyay markan wuxuu noqon doonaa ciyaaryahanka midig ee ciyaariyahanka ugu horeeya ee ciyaartii hore.
Haddii ciyaaryahan kasta uu ku guuleysto ciyaarta: kooxdaadu waxay ka qaadataa dhamaan qodobada ku jira gacanta kooxaha ka soo horjeeda.
Haddii ciyaartu xiran tahay: dhammaan qodobbada ay heleen lammaane kasta waa la tiriyaa.
Labada leh dhibcaha ugu yar ayaa ah guuleystaha, wuxuuna qaataa dhammaan dhibcaha lammaanaha iska soo horjeeda. Haddii ay isku xirmaan tirinta dhibicdan, labada xiddig ee ciyaarta xannibayay ayaa khasaaraya, labada guuleysatana waxay ka qaadanayaan dhammaan dhibcaha labadan. Dhibcaha lammaanaha guuleystey waa la ururiyey oo ciyaarta ayaa dhammaatay markii mid ka mid ah lamaanaha uu gaaro calaamadda 50.
Qiimaha barta ee qayb kasta waxay u dhigantaa wadarta qiimaha labada daraf gabalkeeda. Sidaa darteed, gabalka 0-0 wuxuu u qalmaa 0 dhibcood, gabal 3-4 wuxuu u qalmaa 7 dhibcood, cutubka 6-6 wuxuu u qalmaa 12 dhibcood, iyo wixii la mid ah.
Cayaartu waxay leedahay afar kaqeybgalayaal, oo sameeya labo labo, waana inay fadhiistaan ​​boosas kale.
aragtida ugu aqbalsan waxay tahay inay ka soo muuqan lahayd Shiinaha intii u dhaxeysay 243 ilaa 181 BC , oo uu abuuray askari la yiraahdo Hung Ming.
Waqtigaas, qaybodu waxay aad ugu ekaayeen kaararka lagu ciyaaro, waa ikhtiraac kale oo dalka ka dhacay, oo xitaa waa loo yeedhay "Xarfaha dhibcaha" .
Galbeedka, ma jiraan wax diiwaan gelin ah oo ka dhex jira domino ilaa bartamihii qarnigii XNUMXaad, markay ka muuqatay Faransiiska iyo Talyaaniga, si hufan maxkamadaha Venice iyo Naples, halkaas oo ciyaarta loo adeegsaday hiwaayad ahaan.
Joogsiga xiga wuxuu u muuqdaa inuu ahaa England, oo lagu soo bandhigay Maxaabiistii Faransiiska dabayaaqadii qarnigii XNUMXaad.
Wixii intaa ka dambeeya, waxay kuxirantahay mala-awaalkeena iyo aqoonta aasaasiga ah ee taariikhda, laakiin waxaan kaliya u mahadcelin karnaa soogalootiga, soo dhaweyn ama maya, kuwa ciyaarta keenay dhulka Isbaanishka.
Shayga ciyaarta iyo qurxinta
Baloog yar, oo fidsan iyo afar gees leh, ayaa Dominoes waxaa laga sameyn karaa waxyaabo kala duwan, sida alwaax, laf, dhagax, ama caag.
Noocyada raaxada badan, oo ay wakiisheen kuwa ciyaarta jecel iyo kuwa soo uruuriya, ayaa laga sameeyay marmar, granite iyo soapstone.
Tijaabooyinkan la sifeeyay waxaa badanaa lagu sooxiraa sanduuqyo shaqsiyan ah, oo badanaa laga sameeyay maro jilicsan, waxaana loo soo bandhigaa inay yihiin xubno qurxin run ah
Sida kaararka lagu ciyaaro, oo ay ku kala duwan yihiin, domino-yada waxay wataan calaamado aqoonsi dhinac dhinac ah waana ku bannaan yihiin dhinaca kale.
Wejiga aqoonsiga sita qayb kasta wuxuu u qaybsan yahay, xariiq ama dusha sare, oo loo qaybiyay laba jibbaarane, oo mid walboo ka mid ah lagu calaamadeeyay dhibco taxane ah, sida kuwa loo adeegsaday xogta, marka laga reebo dhowr yarooyinka haray. midab cad.
Nooca Yurub ee ciyaarta, waxaa jira toddobo qaybood oo ka badan kuwa Shiinaha, oo wadar ahaan ah 28 qaybood.
Halka dhagaxa leh tirada ugu badan dinoomadeena caadiga ahi ay tahay 6-6🂓, mararka qaarkood xirmooyin waaweyn oo leh ilaa 9-9 (58 gogo ') iyo illaa 12-12 (91 qaybo) ayaa la isticmaalaa.
Inuit-ka Waqooyiga Ameerika wuxuu ka ciyaaraa nooc ka mid ah domino-yada iyadoo la adeegsanayo noocyo ka kooban 148 gogo '.
Shiinaha, halkaas oo hal-abuurka ciyaaruhu u muuqdo mid aan dhammaad lahayn, ayaa Dominoes sidoo kale waxay u adeegtay aasaas iyo moodal ciyaar la mid ah laakiin ka dhib badan: mahjong .
Maxay yihiin faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka domino?
Ciyaar kasta waxay leedahay faa iidooyinkeeda iyo qasaarooyinkeeda, xitaa mid duug ah sida dominoes. Faa'iidooyinkiisa ayaa ku xeeran hodantinimada ciyaarta iyo faa'iido darrooyinkeeda gaarka ah.
Laga bilaabo faa'iidooyinka, mid ka mid ah waa in ay tahay ciyaar loogu talagalay da 'kasta, maxaa yeelay way fududahay in la fahmo, la isu geeyo oo si fudud wax looga qabto, hadana iyadoo la adeegsanayo istiraatiijiyado aad u tiro badan oo lagu farxo kuwa dheela dheer.
Kooxdaan da'da ah oo aad u tiro badan waxaa ku jira faa iidooyin garasho oo dhowr ah, sida kicinta horumarka caqli-galinta xisaabeed ee kan ugu yar, caqiidada istiraatiijiyadeed ee dadka waaweyn, iyo xusuusta waayeelka
Ugu dambeyntiina, waa ciyaar wax ku ool ah. Iyada oo leh dusha toosan iyo ugu yaraan laba ciyaaryahan, waxay ku filnaan doontaa in lagu bilaabo ciyaarta.
Laakiin xitaa ciyaar faa'iidooyin badan leh waxay leedahay waxyaabo yar yar oo xanaaqa. Anigoo ka bilaabaya xaqiiqda ah waxaa jira afar ciyaartoy, ugu yaraan inta badan cayaaraha. Way adagtahay in la maaweeliyo koox weyn, tusaale ahaan.
Cillad kale ayaa ah "finesse" si loo dejiyo ciyaarta, sida ciyaaraha guddiga badankood ama xitaa cayaaraha guddiga. Qeybaha ayaa la soo ururiyey iyada oo aan lahayn nooc hagaajin ah. Waa shil kadis ah oo miiska saaran waana intaas.
QaybahaXaqiiqdii, iyagu waa dib u dhac naftooda, ugu yaraan markay lumaan, sababtoo ah way yar yihiin, ama way gaboobaan, lumiyaan aragtidooda ama xitaa qiimahooda, dareenka dhibcaha.
Kulan fudud iyo maarayn
Kordhinta xasaasiga ah
Qaybaha lumay iyo / ama duugoobay